Sintomy Grumman S2 Turbo California Dept of Forestry FSX & P3D - Freeware
Milton Shupe sy ny ekipany dia manolotra anay indray, kalitao iray add-on ho an'i Simmers izay maniry hampihatra fanaovan-tsoa amin'ny famonoana afo. Ny Grumman S2 Turbo avy amin'ny Departemantan'ny Ala sy ny Fiarovana Afo any California no kandidà tonga lafatra. Anisan'izany ny firafitra telo, koba virtoaly, fandrefesana ary takelaka voafaritra ary koa feo tena izy. Ary koa miaraka amina firakotra sy lamba mihintsy. Ny firafitra CDF tena izy dia nataon'ny "Firekitten".
Vakio ny antontan-taratasy hahitana ny fomba fampiasana ny fihenan'ny rano "retarding". Raha vao apetraka dia hipetraka ao amin'ny folder "Documents" na "My Documents" ny antontan-taratasy arakaraka ny kinova Windows anao.
Downloads 7 332
avy amin'i Milton Shupe, Scott Thomas, Tom Fliger, Nigel Richards, Rachel Whiteford, ary Jan Visser dia namorona endrika mpanamory fiaramanidina.